အိုင်တီ သမားတွေ နိုင်ငံခြားသွားသင့်သလား မသွားသင့်ဘူးလား - MYSTERY ZILLION
အိုင်တီ သမားတွေ နိုင်ငံခြားသွားသင့်သလား မသွားသင့်ဘူးလား
January 2011 edited March 2011 in IT Debates
ပြောစရာ ငြင်းစရာတော့ မလိုတာအမှန်ပါ .
ဒါပေမယ့် . ငြင်းစရာ မရှိလို့ ငြင်းတဲ့ သဘောပါ .
သွားတာ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ . ဟုတ်ဘူးလား . ဒါ အားလုံးသိတာပဲ ဗျာ .
အဲဒီတော့ သွားတာ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ နေရာက နေ ကျွန်တော် ငြင်းပေးပါ့မယ် :redface::redface:
မကောင်းဘူး ဗျ . နိုင်ငံခြားသွားတာ .
ပထမ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်က တော့ စုနိုင် ဆောင်းနိုင်ပေမယ့် . နောက် လူရည်လည်သွားတဲ့ အခါ ကျတော့
မောင်ကြီး အိမ်မပြန်နိုင် ဇာတ်လမ်းတွေ လာရော . လည်တယ် ပတ်တယ် ပွေးတယ် . ရတာကုန် . အစွန်းထွက်လေး အိမ်ပြန်ပို့ . ဒါနဲ့ ပဲသံသရာလည်နေရော .
အရင် က ရှိခဲ့ တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီး ( အများစု က ဟိုမှာ အပင်ပနး်ခံ စိတ်ညစ်ခံပြီး နှစ်နှစ်သုံးနှစ် ငွေစုမယ် .. ပြီးရင် ပြန်လာပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်မယ် . အဲဒီလိုကိုးဗျ ) လဲ ကြာတော့ ဘယ်လို ပြောင်းသွားလဲ ဆိုတော့ . မပြန်တော့ဘူး ကွာ . ပြန်လဲ ဘာလုပ်ကိုင်စားမလဲ . ချီးထုပ် ပဲ ဖြစ်မှာ ပဲ . . ဒီမှာ ဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ့ . တိုးတက်တာခြင်း ကလဲ ကွာပါ့ကွာ ဆိုပြီး ဟိုမှာပဲ နေ . အမေနေမကောင်းတာတောင်မပြန်နိုင် နဲ့ . အဲ . ဟိုမှာ အလုပ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ကွိုင်တက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးကြောင့် ဖြစ်စေ အမိမြန်မာပြည် ပြန်ရရင်တော့ အဲဒီမှာ စတွေ့ တာပဲ ပြောရမှာပါပဲ .
ဘာမှ မစုမိမဆောင်းမိ . .အစွန်းထွက်လေး ရသလောက်ခြစ်ချုတ်စု ပြီး . ပြန်လာ ဒီမှာ လဲ အဆင်မပြေ ဟိုကို ပြန်သွားဖို့ က လဲ အဆင်မပြေနဲ့ . သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ ဟင်္သာလေး ဖြစ်နေရော .
အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားသွားတာ မကောင်းပါခင်ဗျာ
တရုတ် ဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းဖြစ်ဖြစ် လူကုံကူးပေါ့
လူကုံမကူးချင်ရင် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေယူခဲ့ ပြည်မကြီးရောက်ရင်ပြန်ရောင်းလို့ရတာပေါ့
ဖုန်းတို့ ဟက်ဒစ်တို့ ဘာညာသရကပေါ့
သွားတာကောင်းတဲ့ဘက်က နေပါမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာနေတာထက် ပြည်ပမှာနေပြီး လေ့လာတာက IT သမားတွေအတွက်ပိုပြီး တိုးတက်မယ်ထင်ပါတယ် ပြည်ပက IT မှာပိုပြီးတိုးတက်တာကိုး ဒါပေမဲ့ IT ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးသွားရမယ်လို့ ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး အဲလိုသာသွားနေရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ IT ပညာရှင်တွေဘယ်ရှိတော့မလဲ အဲဒါဆို ကိုယ့်နိုင်ငံပဲ ဆုတ်ယုတ်မှာ ဒါပေမဲ့လည်း IT သမားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးလေ့လာတာက အကောင်းဆုံးထင်ပါတယ် လေ့လာပြီးခါမှ ကိုယ့်အမိမြေပြန်လာချင်ပြန်လာပေါ့ ဒါမှမဟုတ် ဟိုမှာပဲ အခြေချရင်အခြေချပေါ့ ဒါကတော့ ကိုယ့်ပေါ်မူတည်ပါတယ် :biggrin:
January 2011 edited January 2011 Administrators
နိုင်ငံခြားသွားလို့ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာက ဟိုးအရင်က မဆလခေတ်ကလိုဆိုရင်တော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့လေ ၃ နှစ်လောက်လုပ်လည်း မချမ်းသာပါဘူးဗျာ တကယ်တော့ ရတာများပေမယ့် သုံးရတာလည်းများပါတယ် အတော်များများက လခကိုသာ ဗမာငွေနဲ့တွက်ပြီး များတယ်ပြောကြတာ တကယ့်အသုံးစရိတ်က ဗမာပြည်လိုသုံးလို့မရပါဘူး အဲဒီတော့ ဘယ်မှာလုပ်လုပ် တကယ်တော့ လက်ထဲကျန်တာကသိပ်မကွာပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာ နေရရင်ကောင်းပါတယ် နိုင်ငံခြားမှာနေတယ် မပျော်ဘူးဆိုရင်တော့ ဗမာပြည်ပြန်ပေါ့ တစ်ခြားမှနေရတာ ပျော်တယ်ဆိုလည်း ပျော်တဲ့နေရာနေတာကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုပဲရှိပါတယ် ကိုယ်အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် ဘာလုပ်မလဲတော့ ကြိုတင်စီစဉ်ပေါ့ အဲဒါကဘယ်နိုင်ငံ နေနေအရေးကြီးပါတယ် ဗမာပြည်ပြန်နေလို့လည်း အလိုလိုအဆင်ပြေမယ့် မယူဆပါနဲ့ ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ နောင်ရေးအတွက် ဘယ်လောက်စီစဉ်ထားသလဲ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသွားတာ ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မကောင်းတာတစ်ခုက နိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ ဗမာပြည်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့ တရုတ်မလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ :P
နိုင်ငံခြားသွားတာ ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့  မကောင်းတာတစ်ခုက နိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ ဗမာပြည်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့  တရုတ်မလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ :P
လွန်တယ်ေ၀ ့။ အဲဒါကတော ့လွန်တယ် ဟင်းဟင်း နော် ဟင်းဟင်း
အကြော်သည်မမနဲ ့ကောက်ညှင်းပေါင်းကိုကိုနော် ဟိိဟိ
အဲဒါကောင်းတာ အဲဒါကောင်းတာ . .
နိုင်ငံခြားသွားတာ ကောင်းချင်လဲကောင်းပါသည် ... မကောင်းချင်လဲမကောင်းပါ။
U.S ရောက်ရင်တော့..ကိုကို T.K အတွက်ကောင်းပါသည်....U.S မရောက်ရင်တော့ ကိုကို T.K လွမ်းရမည်....ကိုကို T.K .......Aja......Aja........Fighting...:)):)):)):))
IT သမားအတွက်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသွားတာကောင်းတယ်လို ့မြင်ပါတယ် .. ပိုပြီးအမြင်ကျယ်ပြီးတိုးတက်ဖို ့ကလည်းပိုမြန်မယ်လို ့ထင်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်လည်း. သွားတဲ့ဘက်က.. ထောက်ခံပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လည်း..ဆိုတော့.. ဒီမှာထက်စာရင် ပိုပြီးတော့.. အတွေ့အကြုံပိုများနိုင်တယ်လေ.. ပိုပြီးတော့လည်း.. အမြင်ပိုများတယ်.. လူရည်လည်တယ်.. မလည်တာကတော့.. ကာယကံရှင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်.. ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ဖြစ်တဲ့အထိတော့.. မကဲသင့်ဘူးပေါ့..ဗျာ.. ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ..
ကျွန်တောတို့ နိုင်ငံက IT, SE လုပ်ငန်းတွေက သူတို့လောက် စနစ်မကျသေးပါ။ သူတို့ ဆီမှာ ပညာ နှင့်အတွေ့အကြုံယူရဦးမည်။
အဲ... ပြန်လာ မလာ ကတော့ မိမိသဘောပါ။ မိခင်နိုင်ငံမှာလည်း infra-structures, opportunities တွေပေါ်လာရင်တော့ ပြန်လာသင့်သည်ဟုထင်ပါသည်။
ကျနော် က ကိုအီမို ကြီးဘက်က ထောက်ခံတယ်ဗျာ။ နိုင်ငံခြားသွားတာ လုံး၀ လုံး၀ကိုမကောင်းတာပါဗျာ။ ပြောရရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပိုက်ပိုက်နဲ ့မလဲနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ချမ်းသာချင်ရင်တော့ ဒီမှာလည်းရအောင်လုပ်လို ့ရပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တာဘာလည်းဆိုတာ ကိုယ်သိဖို ့ပဲလိုတယ် ။
အဲအဲ ပြောနေလိုက်ကြတာ ..
သွားတာကောင်းတယ် - သွားတာမကောင်းဘူး စကားနပန်းအစီအစဉ်ကြနေတာပဲ ..
သွားတာကောင်းတယ်ထင်ပါတယ် ။။ ဟိုမှာ အတိုလေးတွေ ပိုလန်းပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံခြားသွား တာကောင်းတယ် ၊ မကောင်းဘူး မသိပါဘူး။ လူဆိုတာ ကတော့ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် နဲ့ပဲလေ။ ကိုယ့်ဘာသာ ပဲရွေးချယ်၇မှာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ မှာ တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဘယ်သူမှလဲ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို စွန့်ပြီး သွားချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေကတော့ ပြောကြတယ် ၊ ဒီနိုင်ငံမှာ နေရင် မတိုးတက်ဘူး ၊ နိုင်ငံခြားထွက်ကြ ၊ ဟိုမှာအလုပ် လုပ်။ ဒါပဲ လွယ်လွယ်ပြောကြတယ်။ ထင်သလောက်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဟိုမှာ ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံက လူတွေ နဲ့ အပြိုင်အဆိုင် အလုပ်၇ဖို့ ကြိုးစား၇မယ်။ သူတို့ထက်တော်တာ တောင်မှ မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် သိပ်မရွေးချယ်ကြဘူး။ တခြားနိုင်ငံကြီးက လာ တဲ့လူတွေကိုပဲ ရွေးတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်အပြော မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့လူ တွေ တော်တော်များများ ပြောကြတာပါ။ အဆင်ပြေနေတဲ့ လူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်ကို နည်းနေပါ သေးတယ်။
December 2011 Moderators
အရာရာတိုင်းမှာ ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာက ဒွန်တွဲနေကြတာပါပဲ။ အဓိက အရေးကြီးတာက ကိုယ့်အတွက် ဘာကျန်မလဲ? ဖြစ်လာမယ့် Risk တွေကို ခံနိုင်မလားဆိုတာပဲ အဓိက ကျပါတယ်။
plese use unicode font . If u don't know abt <a href="http://cl.ly/342K3O34023x1A1O3r1W">it</a>; , you can read it here
ကောင်းပါတယ် နိုင်ငံခြားသွားတာ နိုင်ငံမှာ အင်တာနက် လိုင်းတွေကောင်းတယ် hee hee :P
@computerbaby, lol putting that thought aside, which i completely agree! just to show off how fast it's from my place :P, i can downloada4GB movie in under 1 minute. ^^ ...ouch i am being silly here.
anyway, seriously i think it's good to haveapurpose of going overseas. i think the most common purpose of making more money than currently making is probably not good enough.
but then again it depends on the definition of what's right and what's wrong which differs according to who you ask. so let's try to define that the purpose is to make the most amount of money forasingle individual and start from there.
In this case, yes going overseas isamust because staying in myanmar greatly slows down speed of learning. being overseas exposes you to new technology really fast and you are usually provided with tools to pick them up(internet speed generally). and working overseas will also give you the initial capital needed to start something really great back in burma. this kind of capital is not easily attainable as an average IT worker in burma unless you win lottery or you are one-of-a-kind-einstein-level-businessman. i'd usually think of myself as the most average so that the statistics is on my side :P
ဒါမွ နည္းပညယေတြ ပိုရမွာ။
we can get IT more than.